RASMI: Eden Hazard oo ku guuleystay abaal-marinta kubbad sameeyihii ugu fiicanaa xilli ciyaareedkan horyaalka Premier League – Gool FM
(London) 13 Maajo 2019. Weeraryahanka kooxda kubadda cagta Chelsea ee Eden Hazard ayaa ku guuleystay abaal-marinta kubbad sameeyihii ugu fiicnaa xilli ciyaareedkan horyaalka Premier League ee Premier League’s Playmaker Award, kaddib markii xiddiga reer Belgium uu ku dhammaystay meel ka sarreysa Ryan Fraser.
Abaal-marintan oo ay abuureen Premier League xilli ciyaareedkii hore ayaa waxaa la guddoonsiiyaa ciyaaryahanka ugu caawinta badan horyaalka Ingiriiska ama xilli ciyaareed kasta caawinta ugu badan ka sameeya Premier League.
Hazard oo ka soo kacay kursiga keydka kulankii shalay kooxdiisu barbaraha goolal la’aanta ah la gashay Leicester City ayaa abaa-marintan ku muteystay kaddib markii uu 15 gool caawin ka sameeyey horyaalka Premier League xilli ciyaareedkan.
Waxa uu abaal-marintan Hazard ku garaacay ciyaaryahanka kooxda Bournemouth ee Ryan Fraser, kaasoo 14 caawin ka sameeyey xilli ciyaareedkan horyaalka Ingiriiska, waxaana uu hal caawin oo kaliya ka dambeeyaa laacibka Chelsea.
Ciyaaryahanka kooxda Tottenham ee Christian Eriksen iyo da’yarka kooxda Liverpool ee Trent Alexander-Arnold ayaa ku dhammaystay kaalinta saddexaad ee xiddigaha ugu caawinta badnaa xilli ciyaareedkan horyaalka Premier League waxaa ay ka sameeyeen kal ciyaareedkan min 12 caawin.
Trent Alexander-Arnold ayaa noqday difaacii ugu horreeyey taariikhda horyaalka Premier League ee hal xilli ciyaareed 12 gool caawin ka sameeya horyaalka.
Abaal-marinta kubbad sameeyaha ugu fiican ama ciyaaryahanka ugu caawinta badan horyaalka Premier League waxaa xilli ciyaareedkii hore ku guuleystay ee 2017/18 ku guuleystay laacibka Man City ee Kevin De Bruyne, taasoo ka dhigan in labo xiddig oo Belgium ah ay hanteen abaal-marintan tan iyo markii la bilaabay xilli ciyaareedkii hore.
Xiddigaha ugu caawinta badanaa xilli ciyaareedkan 2018-19 horyaalka Premier League:-
Andrew Robertson (11)
Kooxda Man city oo ku guuleysatay horyaalka Premier league iyo natiijooyinka kulamada kale ee la ciyaaray+Sawiro